China Rimsulfuron mpamokatra herisetra famonoana solifonylurea | Senton
Rimsulfuron: famonoana Sulfonylurea
Anarana simika Rimsulfuron
Teboka mitsonika 176-178° C
Vtsindry apour 1.5×10-6Pa（25° C）
Kaody HS: 29335990.13
Rimsulfuron dia Manome hetsika sisa tavela ambony indrindra amin'ny tontolo mangatsiaka sy amin'ny zavatra biolojika ambany, izay fotsy manjelanjelatra.Mangatsakatsaka vovoka. Izany dia fiasa sisa tavela amin'ny tany mba hitazomana ny saha madio mandra-pambolena. Mety ho ampiasaina isan-taona na gramineae maharitra ela sy ny ahidratsy lalalaka any an-tsaha.Rehefa ampiasaina dia tsy misy akony ratsy amin'ny vokatra farany, saingy tsy mety amin'ny fiparitahan'ny katsaka, katsaka ary ny fambolena izany.Tsy misy atahorana ho an'ny katsaka,indrindra ho an'ny katsaka lohataona.Ary misy izany Tsy misy fiankinan-doha amin'ny biby mampinono, ary tsy misy fiatraikany Fahasalamam-bahoaka.
Ny orinasanay Hebei Senton dia orinasa mpivarotra varotra iraisam-pirenena ao Shijiazhuang.Manana traikefa manan-karena amin'ny fanondranana izahay.Raha mila ny vokatray ianao dia mifandraisa aminay.Mpanelanelana simika ara-pahasalamana,Synergist Saddle,Vatokely Flake Phosforus,Hydroxylammonium Chloride ho an'ny Methomyl azo jerena ao amin'ny tranonkalantsika ihany koa.
Mitady ny fanakanana ny famolavolana ny mpamokatra Isoleucine & mpamatsy? Manana safidy malalaka amin'ny vidiny lafo izahay hanampiana anao hamorona. Ny Leucine Valine Amino Acid Essential rehetra dia azo antoka avokoa. Izahay dia orinasa niandohan'i Sina ho an'ny fizarazaran'ny sela sy ny fitomboan'ny zavamaniry. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Bispyribac mpamono hena fambolena avo lenta ...
Vovo-dronono vita amin'ny krystaly fotsy Rimsulfuron
Famonoana olona avy amin'ny rafitra
Sodpia Bispyribac famonoana otrikaretina
Fanaraha-maso ny savony avo lenta Bispyribac-sodium
Amin'ny Sodium Bispyribac Herbicide ampiasaina matetika